Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo Gudaha U Galay Deegaanka Qooqaani. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo Gudaha U Galay Deegaanka Qooqaani.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab waxey dagaal culus ku qaadeen deegaanka Qooqaani oo ka mid ah goobaha shisheeyaha duulaanka kaga suganyihiin gobalka Jubbada hoose.
Dagaalkan oo dhacay fiidkii hore ee xalay waxey ciidamada Mujaahidiinta sigaar ah u beegsadeen saldhig maleeshiyaatka maamulka Ridada Axmed Madoobe ka sameysteen Bartamaha deegaankaasi,iyadoona dagaalkan la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Maleeshiyaatka Murtad Axmed Madoobe ayaa dagaalka markii muddo kooban uu socday waxey bilaabeen iney cagta furaan oo saldhiga isaga cararaan waxeyna u baxsadeen dhanka saldhiga ciidamada Saliibiyiinta Kenya oo ku yaala duleedka deegaankaasi.
Idaacada Islaamiga ee Andalus ayaa baahisay in ciidamada Mujaahdiinta Alshabaab ay la wareegeen gacan ku heynta deegaanka Qooqaani islamarkaan ay burburiyeen difaacyadii maleeshiyaatka Murtadiinta u yiilay deegaankaasi.
Sidoo kale ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa soo qaatay Dukumiitiyo saraakiisha maleeshiyaatka maamulka Murtad Axmed Madoobe kaga carareen gudaha saldhigaasi.